Infographic: Sidee Baraha Bulshadu U Saameeyaan Nolosheena | Martech Zone
Maanta warbaahinta bulshada door muhiim ah ku leenahay nolosheena. Balaayiin dad ah oo adduunka ku nool ayaa u isticmaala iyaga si ay ula xiriiraan, u baashaalaan, u dhex galaan, u helaan wararka, u raadiyaan wax soo saar / adeeg, dukaan, iwm.
Da'daada ama asalkaagu muhiim maahan. Shabakadaha bulshada ayaa si weyn u saameyn doona howl maalmeedkaaga. Waxaad la xiriiri kartaa dadka leh danahaaga midkaaga oo kale waxaadna dhisi kartaa saaxiibtinimo waarta xitaa si qarsoodi ah.
Waad u damqan kartaa dad badan oo kale oo adduunka ku nool adoo adeegsanaya isla hashtag. Xitaa ma tusi kartid sawirkaaga dhabta ah iyaga, laakiin waxay kula falgalayaan waxyaabaha aad ka kooban tahay.
Dhamaan dadka ka soo kala jeeda dhaqamada iyo dhaqamada kala duwan waxay si firfircoon u isticmaalaan shabakadaha bulshada. Xaqiiq ahaan, way adag tahay in la qiyaaso maalin la'aan warbaahinta bulshada.
Waxaas oo dhami waxay ahaayeen uun saamaynta ay baraha bulshada ku leeyihiin shaqsiyaadka. Siyaasiyiinta, dowladaha, milkiilayaasha warbaahinta dhaqanka, xiddigaha, dadka caanka ah, iyo dhamaan shakhsiyaadka saamaynta ku leh ayaa sidoo kale baahinaya fariimahooda iyagoo adeegsanaya shabakadahan.
Dad badan ayaa ku kalsoon kalsoonida wararka warbaahinta bulshada in ka badan wakaaladaha wararka dawlada maxaa yeelay waxay u maleynayaan in dadka isticmaala bulshada ay ka run badan yihiin
Ma jiraan wax maaddo muhiim ah oo adduunka ah oo aan looga hadlin kanaallada bulshada. Marka shabakadaha internetka iyo waxyaabaha ay soo saaraan isticmaaleyaasha ayaa ka kooban qaybo badan oo ka mid ah wararka maalinlaha ah ee adduunka.
Dhinaca kale, ganacsatadu sidoo kale waxay u adeegsanayaan adeegyada bulshada si ay uga faa’iideystaan ​​marinkan ballaaran ee ay u leeyihiin dadweynaha. Ujeeddooyinka ugu sarreeya ayaa badanaa ah wacyigelin caan ah, jiil hoggaamineed, u kaxeynta taraafikada bogagga, koritaanka iibka, iyo hagaajinta adeegyada macaamiisha.
Natiijo ahaan, suuqgeynta iyada oo loo marayo shabakadaha bulshada waxay noqotay mudnaanta milkiileyaal badan oo ganacsi iyo suuqleyba. Fursado badan ayaa loo abuuray suuqleyda, matoorrada waxyaabaha keena, maareeyayaasha warbaahinta bulshada, naqshadeeyayaasha garaafka, iwm tobankii sano ee la soo dhaafay.
Dhacdadan, shaqooyinkani waxay la kulmeen wax kayar qaybaha kale inta lagu gudajiray dillaaca COVID-19. Awoodda loo leeyahay suuqgeynta warbaahinta bulshada ee fog ayaa ku dhiirrigelisay magacyada inay u xilsaaraan suuqleyda fog.
Iyada oo dadku adeegsanayaan internetka iyo shabakadaha bulshada in ka badan sidii hore, fursado cusub ayaa ku milmay magacyada si ay suuq ugu sameeyaan wax soo saarkooda / adeegyadooda.
Markaad raadineyso wax soo saar, 54% dadku waxay u jeestaan ​​warbaahinta bulshada si ay u baaraan. 49% macaamiisha waxay ku saleeyaan iibsashadooda talooyinka saamaynta warbaahinta bulshada.
Ganacsiyada yar-yar waxay si gaar ah u isticmaali karaan fursaddan si ay ugu qabtaan ololeyaal internetka ah. Tani waxay u noqon laheyd mid wax ku ool ah oo qiimo-jaban iyaga oo kordhin doonta kuwa raacsan isla markaana xoojin doonta gunta hoose.
Isku soo wada duuboo, saameynta ay baraha bulshada ku leeyihiin nolosheena waa mid muhiim ah. Sidaa darteed, kooxdayada ku jirta Socialtradia go'aansaday in la soo koobo oo la muujiyo xogta ugu muhiimsan ee arintan ku saabsan oo ah qaab muuqaal ah.
Macno malahan inaad tahay isticmaale guud ama suuq geyn, waxaan kugula talineynaa inaad tixgeliso xogtaan si aad u ogaato muhiimadda shabakadaha bulshada.
Tags: jiilka ledbarashosaamaynta iibsigawarbaahinta bulshada ee infographicwarbaahinta bulshadatirakoobka warbaahinta bulshadasaameynta shabakada bulshadatirakoobka shabakada bulshadasocialtradiabulsho ahaanTikTokwaxyaabaha ka kooban isticmaale